Cayda xaaska maxay u jecel yihiin raga qaar
Guurka waa naxaariis iyo jacayl marka waxaa laga rabaa inuu ahaado mid lagu dhisayo guri fiican degan oo ka soo bixi kara ubad adab badan, haddii ninka iyo xaaskiisa ay cay isu wadaan mar kasta sidee buu u iman karaa cunug dhowrsan oo adab leh, ilmaha waxay ku daydaan waalidka aad bay u fiiriyaan waxa ay sameeyaan marka guriga la joogo tarbiyada caruurta ma aha keliya hadalka labada waalid ay ilmaha amraan ee waa falka iyaga ka soo fulo.
Ninka muxuu u caayaa xaaskiisa?
cayda waa akhlaaq xumo oo dadka ay ku dhaqaaqaan rag waxaa jira xaasaskooda caayo xitaa ku caaya cay xun oo meel ka dhac u ah waalidkeeda aflagaado xun afxaarnimo aan la soo koobi karin dullaysi, waxaas oo dhan wuxuu tilmaamayaa xumaanta ninka oo falkiisu sidaas yahay, xaaskaaga cayda ka ilaali, haddii ay wax ku qaldanto hadal macaan oo jacayl ku salaysan ku deji sheekada.
Naagaha iyagana ragga caaya
Haween waxaa jira afxumo ku dheereeya oo ragooda si xun u caaya, xitaa ku caya raganimadooda ama ka faafiya sirta sariirta ku dhex marto labadooda oo galmada shaqo ku leh, waxaa dhici krta inay u sheegto dadka ay dhahdo kan wax matare waaye, khaniis waaye hadaldaas oo aadka u liita ayay ninkeeda ku caynaysaa marka waxaa waajib ah in laga fogaado anshax-xumada noocaas ah.
marka ninka cayda jecel waxaa ku xambaara dabeecad xumada iyo liidnaanta uu dareemayo iyo isaga in la soo dulaysan jiri marka wuxuu ka gudayaa xaaskiisa.
Language and Identity in Africa: An Analysis of the Use of Place Names as Part of Person’s Name in Hausa